ငါ့လမ်းဒါမှမဟုတ် TIKTOK အဝေးပြေးလမ်းကြောင်း - သတင်း
'My Way or highway' TikTok လမ်းကြောင်းသည်ကြည့်ရှုသူတစ်သန်းရရှိရန်အတွက်အာမခံချက်ဖြစ်သည်
ဤနေရာတွင်သင်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါကထိုအရသာရှိလှသော TikTok အမြင်များကိုသင်မည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း၊ နောက်သုံးမိနစ်အတွင်းအသေးစိတ်ဖတ်ရှုမည်၊ သို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး TikTok လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်ယခုမည်မျှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျံ့နှံ့နေသည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်သောသငျသညျမြားအတှကျ, ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုသွား: ဆယ်ကျော်သက်ဟာသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအဆင်သင့်ရွေးချယ်မှု၏မိဘများ၏ရှေ့မှောက်၌ TikTok မှတ်တမ်းတင်စတင်သည်။ သူတို့ဟာအသံအတွက်အောက်ပါကဗျာလိုင်းကို Mime:
သငျသညျအကြှနျုပျကိုခွေးဟုခေါ်လျှင်, သင်ကများ၏ရှေ့မှောက်၌အဆိုးဆုံးထားသေချာပါစေ။ မြည်းကိုပေါက်။
ထို့နောက်သူတို့သည်ထွက်ပြေးသွားသောအခါခေါင်းကိုနောက်ကျောတွင်ဆိုးဝါးစွာဒဏ်ရာရရှိသွားသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒီအသံကိုတဆင့်လှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့မိဘတွေစော်ကားခံရတဲ့လူတွေစုစည်းထားတာဖြစ်တယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ဤအရာသည်သူ့ဟာသူကောင်းသောအရာအားလုံးကိုအသံမထွက်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဤလမ်းကြောင်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ကြားဖြတ်မှုများအားလုံးဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အဆုံးမှာကြောင်းရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး ဆုံးရဲ့အရေးကြီးသောပစ္စည်းပစ္စယဖြေဆိုကြကုန်အံ့ - ငါ့လမ်းသို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး TikTok လမ်းကြောင်းသစ်ကဘာလဲ ကျွန်ုပ်၏လမ်း (သို့) အဝေးပြေးလမ်းမကြီး TikTok လမ်းကြောင်းမှသီချင်းကဘာလဲ။ အောက်ပါကလစ်သို့မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသနည်း။ မြည်းမေးရိုးကိုမေးကြည့်ပါ၊
@ lall0r0na ငါ့ဆံပင်တွေက Donny Thornberry အတွက် pls တွေကိုလျစ်လျူရှုထားတယ် ## mywayorthehighway ##ကိုယ့်နည်းလမ်း ## fyp ##မင်းအတွက် ## TheHighNote ## xyzbca ♬မူရင်းအသံ - lall0r0na
ဒီတော့ငါ့လမ်း (သို့) အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘယ်လိုပေါ်လာပြီလဲ။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ ကလေးကမိဘကိုရောင်ရမ်းတာတစ်ခုခုပြောတာကိုမိဘကတုံ့ပြန်တယ် ဤမူကြိုမဟုတ်သောဗီဒီယိုများသည်သန်းနှင့်ချီ။ ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တစ် ဦး ကိုပြပြီးလျင်မြန်စွာရွေ့လျားသွားမည်။
@cocojones ငါ့ခေါင်းပေါ်မှာအမှန်တကယ်ထုံး ## fypage ## ဗိုင်းရပ်စ် ##ကိုယ့်နည်းလမ်း ## jk ♬မူရင်းအသံ - .taylorsprivate
ဟင်း။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်နားမလည်ပါကအသံသည်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည်။ အဖွင့် Bard-esque monologue, ထို့နောက်နောက်ဆက်တွဲသီချင်းဖြစ်သည်။
ကန ဦး ပြောသောအနုပညာစကား - အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုခွေးဟုခေါ်လျှင်မကောင်းမှုကိုအသာ ပေး၍ သေချာအောင်လုပ်ပါ။ - Rapper ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျော်ကြားသောနာမည်ကျော် Rapper Trina မှ Instagram Live rant မှဖြစ်သည်။ YouTube တွင်သန်းနှင့်ချီသောအမြင်များ ) Lil Wayne နှင့်ပြင်သစ် Montana တို့နှင့်တွဲလုပ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ
ထိုအချိန်တွင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်မိဖုရားခရိမှ My Way အဖြစ်သိသောတနှစ်တည်းမှသီချင်းနှင့်ရောစပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းရရှိရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အဓိကအားဖြင့် Mrs Key မှအိုဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အက္ခရာတင်သောသူသည်၊
TikTok အသံမှာအစွမ်းထက်တဲ့အမျိုးသမီးအသံနှစ်ခုကိုသင်ရောထွေးပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရတယ်။ သိ ကျွန်ုပ်၏လမ်း (သို့) အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအသံကိုပထမဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသောအသုံးပြုမှုသည် user @ jerryyy.jones မှဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
@ jerryyy.jones ဒါကသကြားလုံး Tho မှတဆင့်လာမယ့်လိမ့်မည် ## အစိမ်းရောင် ## လိင်တူချစ်သူ ## lgbt ##မင်းအတွက် ## fyp ##ကိုယ့်နည်းလမ်း ♬မူရင်းအသံ - .taylorsprivate
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါဟာ TikTok အပေါ်ကြီးမားတဲ့အမြင်တွေကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ရဲ့ rehashed impression-based version များပါ။
ကျွန်ုပ်၏ TikTok အပေါ်ကျွန်ုပ်၏လမ်း (သို့) အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ။
အသုံးပြုသူများသည်ထိုလမ်းကြောင်းကိုသီချင်း၏စာသားများပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းများကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်မူရင်းအသံကိုအစဉ်လိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်သောနောက်ဆုံးပုံစံသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါ့ကိုငါ့ကို Mouse ဟုခေါ်ပါက Mickey Mouse ကိုကျွန်ုပ်၏လမ်း (သို့) အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာသီဆိုနေခြင်းကိုမပြုလုပ်မီလမ်းကိုရှေ့တွင် Mickey ထားရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ လိုက်တယ်အသံပေမယ့်အကြီးပါပဲ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကောင်းဆုံးဥပမာအချို့ကိုကြည့်ပါ။
@avivazafrin သင် ITAT ၏ @Sundalive ၏ရှေ့မှောက်၌ပြဇာတ်ရုံထားပါသေချာအောင်လုပ်ပါ ## mywayorthehighway ## fyp ## မေမေ ## blacktiktok ## ရယ်စရာ ## ဘရော့ဒ်ဝေး ## someonepleasecastmeicantpayfornyu ♬မူရင်းအသံ - avivazafrin
@shelbyhyoung alexa vs. Siri ## ဆီရီ ## myvoice ## Alexa ## fyp ##မင်းအတွက် ## xyzbca ##ပုံပြောချိန် ## mywayorthehighway ## TheHighNote ## အိမ်စာ ## ရန်ပွဲ ♬မူရင်းအသံ - shelbyhyoung
@ jasmine.aliyah အမြဲတမ်း perkipsy ## mywayorthehighway ## fyp ## ratethings ## tiktokanimals sound မူရင်းအသံ - jaasmine.aliyah
@sharrne_xo ငါ၏အလမ်းသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးနည်းလမ်း🧽 ## fyp ##မင်းအတွက် ## mywayorthehighway ## မြည်းကောင် ♬မူရင်းအသံ - sharrne_xo
@caitlynbaggett နေခြည် ♬မူရင်းအသံ - madiidrew
သင်လိုအပ်သမျှသည်ထင်မြင်ချက်များကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်အမြင်များရသည့်အခါငါ့ကိုဂုဏ်ပြု။ သွား! သွား! သွား!
• Celeb မိဘများကိုဗီဒီယိုများထဲသို့ဆွဲဆောင်နေသောကျော်ကြားသော TikTok ကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံပါ
•လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအယ်လ်ဘမ်အဖုံးများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဒီ TikTok လမ်းကြောင်းကသင့်ကိုကျော်ကြားလိမ့်မယ်
•စတော်ဘယ်ရီနို့သည်နောက်ဆုံးပေါ် TikTok လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်၊ ဤတွင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်